Office | January 2020
10 mmemme maka nsuso oge
Ịchọta nhazi ọ bụla mgbe ejiri ya mee ihe ga-enyere usoro mmemme oge. Taa, ndị mmepe na-enye ụdị dịgasị iche iche nke mmemme ndị a, na-eme ka ọnọdụ na mkpa nke ụlọ ọrụ ọ bụla, na-egosi, na mgbakwunye na arụmọrụ bụ isi, ọrụ ndị ọzọ.
2 "mmemme ọlaedo" maka ịmepụta ederede 3D na ihe odide
Ndewo N'oge na-adịbeghị anya, ihe a na-akpọ 3D ederede na-enweta nkwado: ọ dị oke mma na-adọta mmasị (ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ọ na-achọ). Iji mepụta ederede dị otú ahụ, ịkwesịrị: ma jiri ụfọdụ "nnukwu" editọ (dịka ọmụmaatụ, Photoshop), ma ọ bụ ụfọdụ pụrụ iche. mmemme (nke ahụ bụ ihe m chọrọ ibi na isiokwu a).
Otu esi emepụta ule na HTML, EXE, FLASH formats (ule maka PC na weebụsaịtị na Intanet). Ntuziaka.
Ezi ụbọchị. Echere m na onye ọ bụla ọ dịkarịa ala ọtụtụ ugboro ná ndụ ya gafere ule dị iche iche, karịsịa ugbu a, mgbe ọtụtụ nyocha na-eduzi n'ụdị ule ma gosipụta pasent nke isi ihe. Ma ị gbalịrị ịmepụta ule n'onwe gị? Eleghị anya ị nwere blog ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ gị ma ị ga-achọ ịlele ndị na-agụ ya?
Esi sụgharịa akwụkwọ. Dịka ọmụmaatụ, site na Bekee na Russian
Ọrụ kachasị mkpa bụ nsụgharị ederede site n'otu asụsụ gaa na nke ọzọ. Ọ na-ejikarị ọrụ yiri nke ahụ pụta mgbe m na-amụ ihe mgbe ọ dị mkpa ịsụgharị asụsụ Bekee gaa na Russian. Ọ bụrụ na ị maghị asụsụ ahụ, ị ​​nweghị ike ime n'enweghị nsụgharị nsụgharị pụrụ iche, akwụkwọ ọkọwa okwu, ọrụ ntanetị!
Mmemme Excel na Okwu maka gam akporo
N'oge na-adịbeghị anya, usoro iheomume Android aghọwo ihe a ma ama, ọtụtụ ndị nwere ekwentị, mbadamba, mgbakọ egwuregwu, wdg. Ya mere, na ngwaọrụ ndị a, ị nwere ike mepee akwụkwọ ndị dị na Excel na Okwu. Enwere mmemme pụrụ iche maka gam akporo os maka nke a, m ga-achọ ikwu maka otu n'ime ndị a na isiokwu a ... Ọ bụ ihe gbasara akwụkwọ iji gaa.
Esi lelee akara edemede na ntụgharị okwu na ntanetị - nhọrọ nke ihe bara uru
Ndewo Onye ọ bụla n'ime anyị mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmpụta ga-ederede otu ma ọ bụ ọzọ ederede. Iji ghọta gị n'ụzọ ziri ezi, ịkwesịrị idenye akara akara aka na ya (site na ụzọ, ihe atụ dị na foto dị n'aka ekpe, site na ihe ngosi a ma ama, bụ ihe na-egosi: "enweghi ike igbu mmadụ maka ebere"). Mgbe ụfọdụ otu komma nwere ike ịgbanwe ihe niile e dere!
Ịghọta ihe ederede. Usoro mmemme - analogue FineReader
N'oge na-adịghị anya, ndị niile na - arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na - ahụ maka otu ọrụ - nyochaa ederede site na akwụkwọ, magazin, akwụkwọ akụkọ, obere leaflet, wee sụgharịa foto ndị a dị ka ederede, dịka ọmụmaatụ, n'ime ihe ederede Okwu. Iji mee nke a, ịchọrọ nyocha na mmemme pụrụ iche maka njirimara ederede.
Kedu esi ede ederede mara mma n'enweghị mmemme? Kedu otu esi etinye foto na ntanetị?
Ekele ndị niile na-agụ akwụkwọ! A na - ajụkarị m ka ị kọọ otu ị ga - esi dee ederede mara mma ma ọ bụrụ na ịmeghị ihe ọ bụla (dịka Adobe Photoshop, ACDSee, wdg, ndị editọ, ndị na - achọta ya dịka ihe siri ike na ogologo iji mụta otú e si arụ ọrụ n'ọtụtụ "nkịtị" ma ọ bụ karịa). N'ikwu eziokwu, mụ onwe m adịghị ike na Photoshop ma m maara, ma eleghị anya, ihe na-erughị 1% nke atụmatụ nile nke usoro ihe omume ahụ.
Ihe iji dochie Microsoft Office (Okwu, Excel ...). Analogues na-adịghị
Ezi ehihie Ihe mbụ nke ọtụtụ ndị ọrụ na-eme mgbe ịzụta kọmputa ma ọ bụ reinstalling Windows na-etinye ma hazie ngwà ngwa ngwa ụlọ ọrụ - n'ihi na na-enweghị ha, ị pụghị ịmepe ọ bụla akwụkwọ nke usoro ndị a ma ama: doc, docx, xlsx, wdg. Dịka iwu, họrọ Microsoft Office software maka nzube ndị a.
Ọrụ nchịkọta ederede ederede
Ekele ndị niile na-agụ blog! Echere m na ndị na-arụ ọrụ na kọmputa (anaghị arụ ọrụ, ma ọ na-arụ ọrụ), aghaghị iji ihe ederede mara. Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, ị nyochachara ihe odide site na akwụkwọ ahụ ma ugbu a ịkwesịrị igbunye akụkụ a n'ime akwụkwọ gị. Mana akwukwo a bu ihe osise, anyi choro ederede - n'ihi nke a, anyi choro mmemme puru iche na oru ntanetua maka ichota ederede site na foto.
Mgbochi ikuku - nyochaa ederede maka iche iche maka n'efu
Ezi ụbọchị! Kedu ihe na-adọrọ adọrọ? A na-aghọtakarị okwu a abụghị ozi pụrụ iche nke ha na-agbalị ịhapụ dịka nke ha, mgbe ha na-emebi iwu nwebisiinka. Ugbochi na-emechi anya - nke a na-ezo aka na ọrụ dịgasị iche iche na-alụso ozi ndị na-abụghị ndị pụrụ iche nwere ike ịlele ederede maka ọdịiche ya.
Ppt na pptx converters. Nkọwa okwu na PDF.
Ndewo Ọrụ kachasị maka ọtụtụ ndị ọrụ bụ nsụgharị si n'otu usoro gaa na nke ọzọ, na nke a, anyị na-ekwu maka usoro ppt na pptx. A na-eji usoro ndị a mee ihe na usoro Microsoft Power Point maka ịmepụta ngosi. Mgbe ụfọdụ, a chọrọ ka a tọghata ppt ma ọ bụ pptx usoro nke onye ọzọ, ma ọ bụ n'ozuzu na usoro ọzọ, dịka ọmụmaatụ, na PDF (mmemme maka ịmepe PDF).
Microsoft ga-emelite atụmatụ nke usoro Office
N'oge na-adịbeghị anya, a kọrọ na a ga-ewepụta nsụgharị ọhụrụ nke Okwu, Excel, PowerPoint, na Outlook. Kedu mgbe Microsoft ga-emezi ihe owuwu Office, oleekwa mgbanwe ndị ga-eso? Mgbe echere mgbanwe ndị ọrụ ga-enwe ike inyocha nhazi na ọrụ nke Okwu, Excel na PowerPoint na June nke afọ a.
Nyocha na OCR
Ezi ehihie Eleghị anya onye ọ bụla n'ime anyị chere ọrụ ahụ ihu mgbe ịkwesịrị ịsụgharị akwụkwọ edemede akwụkwọ na kọmputa. Nke a dị mkpa karịsịa maka ndị na-amụ ihe, na-arụ ọrụ na akwụkwọ, na-asụgharị ihe ederede iji akwụkwọ ọkọwa okwu kọmputa, wdg. N'isiokwu a, m ga-achọ ịkọrọ ụfọdụ n'ime ihe ndị dị mkpa nke usoro a.
Esi jiri ABBYY FineReader sụgharịa foto na ederede?
Isiokwu a ga-abụ ihe mgbakwunye nke gara aga (https://pcpro100.info/skanirovanie-teksta/), ma kọwaa n'ụzọ zuru ezu ihe dị mkpa nke ederede ederede. K'anyị malite n'ebumnuche, nke ọtụtụ ndị ọrụ aghọtachaghị. Mgbe ị gụsịrị akwụkwọ, akwụkwọ akụkọ, magazin, wdg, ị ga-enweta ihe osise (t.
Akwụkwọ ọkọwa okwu Bekee kacha mma
Ndewo N'ihe dịka afọ 20 gara aga, mgbe m na-amụ Bekee, aghaghị m ịgbanarị akwụkwọ akụkọ, na-etinye oge dị ukwuu ịchọ otu okwu! Ugbu a, iji chọpụta ihe okwu a na-amaghị ama, ọ ga-ezuru 2-3 igodo ya na òké, na n'ime sekọnd ole na ole, chọpụta nsụgharị ahụ. Technology adịghị ada!
Esi emeghe faịlụ PDF? Ihe omume kacha mma.
Taa, e nwere ọtụtụ ihe omume dị iche iche na netwọk maka ịlele faịlụ PDF, na mgbakwunye, a na-emepụta usoro ihe omume n'ime Windows 8 arụ ọrụ iji mepee ma na-ele ha anya (otu o si arụ ọrụ ka ọ ghara ikwu banyere ya). Ọ bụ ya mere na n'isiokwu a, achọrọ m ịtụle mmemme ndị bara uru ga-enyere gị aka mepee faịlụ PDF, gụọ ya, gụọ ya ma pụta na foto ahụ, jiri nwayọọ gwuo gaa akwụkwọ achọrọ, wdg.
Kedu esi eme ihe ngosi n'ụzọ ziri ezi: ndụmọdụ nke ndị nwere ahụmahụ ...
Ndewo Ntak emi "ọkpọsọn̄ọde"? Enwere m ọrụ abụọ: otu esi eme ya n'onwe gị ma chee ihe ngosi ahụ, ma nyochaa ha (n'ezie, ọ bụghị dịka onye na-ege ntị na-ege ntị :)). N'ozuzu, enwere ike ikwu ozugbo na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ na-emepụta ngosi ahụ, na-elekwasị anya nanị na ha "dịka / enweghị mmasị."
Olee otú ị ga-esi chekwaa ederede na pdf usoro?
Ezi ụbọchị! Ọtụtụ ndị ọrụ na-echekwa ọtụtụ n'ime akwụkwọ ha na usoro .doc (.docx), ederede ederede ọtụtụ mgbe na txt. Mgbe ụfọdụ, a chọrọ usoro ọzọ - PDF, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ bulite akwụkwọ gị na Ịntanetị. Nke mbụ, PDF dị mfe na-emepe ma MacOS na Windows. Nke abuo, nhazi nke ederede na ndi ozo nke nwere ike di na ederede gi adighi efu.
Kedu esi lelee mkpoputa okwu n'igwe
Ezi ụbọchị. Ọbụna ndị ọkachamara na-agụghị akwụkwọ abụghị ụdị njehie ọ bụla na ederede. Ọtụtụ mgbe, njehie na-eme mgbe ị na-eme ọsọ ọsọ, ị na-arụ ọrụ na nnukwu ozi, na enweghị nchekasị, mgbe ị na-ewu iwu ndị dị mgbagwoju anya, wdg. Iji mee ka ọnụ ọgụgụ nke njehie dịkarịa ala - ọ ga-adị mma iji ụfọdụ mmemme, dịka ọmụmaatụ, Microsoft Word (otu n'ime nyocha kacha mma).
https://termotools.com ig.termotools.com © Office 2020